कठिन दान गर्न लुम्बिनी- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १, २०७६ मनोज पौडेल
(लुम्बिनी) — श्रीलंकाको कुर्नागलका पियतिलक वण्डार एक दशक पुरानो चाहना पूरा भएपछि दंग देखिन्थे । बुधबार बिहान ५ नबज्दै उनले नुहाइधुहाइ सफा कपडा लगाए । गौतम बुद्धको दाँत रहेको मुलुकबाट बुद्ध जन्मस्थल आउन पाउँदा पुण्य सञ्चय गरेको उनको विश्वास थियो ।
कोलम्बोबाटै आएकी श्रीकान्ति इदिभिमले पनि लुम्बिनीको बखान गरिन् । उनले पनि यहाँ चिवर दान गरेर शान्ति सञ्चय गर्न पाउँदाको खुसी पनि सुनाइन् । ‘यस्तो दानले मनभित्रैबाट भ्रातृत्व, करुणा र सद्भाव बढाउन उत्प्रेरित गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘दानपछि विगतमा नजानेर गरेको कमजोरीबाट मुक्त हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
श्रीलंकाका विभिन्न स्थानबाट आएका ९० उपासक लुम्बिनी आएर यसरी नै दान गरे । बर्सेनि बौद्धमार्गीहरू श्रीलंकाबाट दानका लागि आउँछन् । यसलाई कठिन दान भनिन्छ । श्रीकान्तिका अनुसार श्रीलंकामा बौद्धधर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा ‘तीनमहिने वर्षावास’ मनाइन्छ । यसै क्रममा ‘कठिन दान’ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सात दिनको यात्रा गरेर यहाँ आएँ,’ उनले भनिन्, ‘फेरि सातै दिनको यात्रा गरेरै फर्किन्छौं ।’ कठिन दानकै लागि १० वर्षे बालकदेखि ७५ वर्षे वृद्धसम्म लुम्बिनी आएका छन् । उनीहरूका अनुसार तीन महिना वर्षावासमा भिक्षुहरू अनुशासनमा बस्छन् । भिक्षा मागेर खान्छन् । साँझ–बिहान ध्यान बस्ने र परित्रान पाठ गर्ने गर्दछन् । त्यस बेला धर्म देशना गर्दै पूजाआजा गर्छन् ।
कठिन साथ भिक्षुका नीति–नियम पालना गरेर (विनय कर्म) वर्षावास पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कठिन दान भनिएको हो । महाबोधी सोसाइटी अफ भारत लुम्बिनी शाखाद्वारा कठिन दान कार्यक्रम गरिएको हो । उनीहरूले पहिलो दिन मंगलबार दिनभरि पूजाआजा गरेका थिए । साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म शान्तिका लागि नेपाली, श्रीलंकाली, म्यान्मार र थाई भिक्षुले महापरित्रान पाठ गरे । बुधबार बिहान पूजा गर्न मायादेवी मन्दिर जाँदा श्रीलंकाबाट ल्याइएको कठिन चिवरलाई पवित्र बाकसमा राखी सिँगारेर लगिएको थियो । पवित्र अष्टधातु पनि सिँगारेर मायादेवी मन्दिरमा लगेर पूजाआजा गरिएको थियो । मन्दिर परिसरको अशोकस्तम्भ आसपास चारैतिरबाट फूलले सिँगारेर चिटिक्क बनाइएको थियो । पूजापछि मायादेवी मन्दिरबाट महाबोधी कार्यालयसम्म झाँकीसहित शान्ति पदयात्रा पनि निकालिएको थियो ।
शान्ति पदयात्रापछि कठिन पूजा गरिएको थियो । उक्त अवसरमा शिल प्रदान गरियो । धर्मदेशना दिइयो । यसपछि वर्षावास बसेका भन्ते बी नन्दलाई उनका शिष्यले भिक्षुले लगाउने पहेंलोवस्त्र (चिवर) र भिक्षा पात्र दान गरे । त्यस्तै उपासकले श्रीलंकाबाटै ल्याएको चिवर दान गरे । कसैले अष्टपरिकार दान गरेका थिए । भिक्षुले लगाउने पहेंलो वस्त्र (चिवर) र भिक्षा पात्रलाई चिवर दान भनिन्छ । अष्टपरिकारमा भिक्षुका लागि आवश्यक कपाल र दारी खौरने समान, भित्री बाहिरी कपडा, सियो–धागोलगायत ८ सामग्री हुन्छ । चिवर दानपछि भन्तेलाई भोजन दान गरिएको थियो । कार्यक्रमका मूलगन्ध कोटि विहार वाराणसी भारतका प्रमुख भन्ते धम्मरतन महाथेरो प्रमुख अतिथिका रूपमा थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ०९:४५
काठमाडौँ — यस वर्षको योगेश्वर वाङ्मय पुरस्कारबाट जुम्लाका स्रष्टा पुरीचन्द्र देवकोटा पुस्कृत हुने भएका छन् । पुरस्कार २५ हजार रुपैयाँ र सम्मानपत्र रहेको छ । जाजरकोटका स्रष्टा एवं समाजसेवी योगेश्वर कार्कीको स्मृतिमा छोरा राजेश्वरले यो पुरस्कार स्थापना गरेका हुन् ।
मोफसलमा रहेर पनि नेपाली भाषा र साहित्यमा योगदान पुर्‍याएबापत् देवकोटा पुरस्कृत हुन लागेको योगेश्वर स्मृति प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कलासंस्कृतिप्रेमी प्राडा. ग्रेगरी जी मस्कारिनेकद्वारा स्थापित ‘ग्रेगरी कलासंस्कृति पुरस्कार’ बाट यस वर्ष जुम्लाकै कलासंस्कृतिका साधक स्रष्टा खडानन्द चौलागाईं पुरस्कृत हुने भएका छन् । पुरस्कारमा २० हजार रुपैयाँ र सम्मान पत्र रहेको छ । दुवै पुरस्कार पुरस्कार भने नेपाली कलासाहित्यडटकम प्रतिष्ठानमार्फत् दिइँदै आएको छ ।
दुवै पुरस्कार मोफसलका स्रष्टालाई प्रेरणा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोमिला जोशीले बताइन् । ‘मेरो राष्ट्र मेरो ध्येय’ सन्देशका साथ प्रतिष्ठान र खस साहित्य समाजले यही कात्तिक २ गतेदेखि जुम्लामा गर्न लागेको ‘प्रकृति सिर्जना उत्सव’ मा पुरस्कार वितरण गरिने पनि उनले बताइन् ।
यसअघि योगेश्वर वाङ्मय पुरस्कारबाट डा. कृष्णराज डीसी, अमर गिरी, कृष्णभूषण बल, उषा शेरचन, वनमाली निराकार, मुकुन्द प्रयास, दिलीप शाह, कृष्णराज ओलिया र पद्मराज जोशीलाई प्रदान गरिसकिएको छ भने ग्रेगरी कलासंस्कृति पुरस्कारबाट शेरबहादुर अधिकारी र पूर्ण समीर महतारा सम्मानित भइसकेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ०९:४३